FILOHA RAVALOMANANA MARC : NITONDRA NY HAFATR’I NENY LALAO RAVALOMANANANA HO ANY VEHIVAVY – MyDago.com aime Madagascar
Miarahaba ny vehivavy rehetra hoy ny filoha Ravalomanana Marc amin’izao fankalazana nyandro 08 martsa, andro izay natokana indrindra indrindra ho an’ny vehivavy izao. Andro iraisam-pirenena izany hoe andro iraisan’ny vehivavy rehetra maneran-tany ny andro androany. Koa dia miarahaba ny vehivavy rehetra aho, ao ny vehivavy reny, ao ny vehivavy izay manana andraikitra isan-tokony, ao ny vehivavy mahafantatra tsara ny ho aviny noho ny fahatanorany. Miarahaba anareo rehetra tsy ankanavaka aho hoy izy amin’ny anaran’i Neny Lalao Ravalomanana.Miteny amin’ny anaran’i Lalao aho satria dia feno dia feno ny fony noho izy tsy afaka mody nefa ny ny reniny marary mafy. Raha vao miteny kely izy dia mbola mihaotraotra, koa dia miala tsiny aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc. Izay no mahatonga ahymiteny hoy izy ka i Dada no miteny fa tsy Neny. Mahafantatra ny zavatra rehetra tiany ho lazaina aho, izy koa mahafantatra tsara ny zavatra ataony anareo.Noho izany dia teny avy aminy no entiko eto anatrehanareo.Miarahaba ny vehivavy rehetra aho, ny vehivavy Malagasy, ny vehivavy vahiny, ary ny vehivavy rehetra. Miarahaba manokana ho anareo izay tonga eto amin’ny Magro.Nanafatra mafy izy hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa mafy dia mafy ny mahazo azy fa amin’ny andron’ny vehivavy no marary ny reniny. Hoy aho n’inon’inona mitranga dia isika tsy maintsy mijoro , tsy maintsy manatanteraka ny adidy ary tsy maintsy mifanampy. Koa Manampy azy aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc, miteny aminy anarako. Manampy azy aho haniry soa ny vehivavy rehetra manrena an’i Madagasikara sy any ivelany, manampy azy hampita aminareo ny hetahetany sy ny fitiavany amin’ny vehivavy Malagasy. Maniry izy raha maniry hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa ahita ny reniny, ny fianakaviany, ny zanany. Raha sitrapon’Andriamanitra dia ho tonga izy ary ahita azy ianareo ary izy koa ahita anareo. Manana ny zony ny vehivavy raha tsy hilaza fotsiny aho fa ny vehivavy no maro an’isa ao Madagasikara. Ny vehivavy hoy ny filoha Ravalomanana Marc no tomponandraikitra ao an- tokantrano satria izy no miahy ny ankohonana. Izy no akaiky ny zanany indrindra . Maniry anareo reny manana andraikitra, manana adidy aho hoy izy,mba hahatanteraka izany adidy aman’andraikitra izaysahaninareo ao amin’ny ankohonana izany. Ny vehivavy ihany koa amin’izao fotoana izao dia mandray andraikitra. Manana andraikitra lehibe ny vehivavy hoy izy na fitantananany ankohonany na ny fiainana andavanandro na amin’ny andraikitra iraisam-pirenena. Manana izany fahaizana manokana izany ny vehivavy. Ny 08 martsa hoy izy dia andro lehibe tokoa ahafahan’ny vehivavy maneho ny heviny. Hoy izy tamiko hoy ny filoha Ravalomanana Marc mba lazao hampiseho ny hafaliana ny vehivavy Malagasy, mba hampiseho ny fitiavany, ny namany, ny firenena.Mba lazao ny vehivavy malagasy izany fa lehibe tokoa ny fitiavany anareo. Maniry izy raha maniry mba ahafany mampandroso mandray anjara ny vehivavy toa azy. Farany dia tsy hoe ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy ihany koa aza, satria tsy mety raha irery ny vehivavy fa tsy misy lehilahy. Hoy aho aminareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc, tsy maintsy miasa miaraka isika mba hampandrosoana ny firenentsika. Tsy maintsy miasa miaraka isika hoy izy mba ahafahantsika manatanteraka ny asa ataontsika isan’andro isan’andro eto dia ny hoe ny famerenana ny ara-dalàna. Tsy maintsy miasa miaraka isika mba hisian’ny famirampirantan’i Madagasikara vaovao indray. Mahereza ianareo vehivavy, ny lehilahy hoy izy fa tsy maintsy ho tonga ny fotoana hanarenantsika an’i Madagasikara, hanomezantsika hasina izany vehivavy izany, mba hanana ny hasiny ny vehivavy izay kitapo nifonosana.Mamerina ny fisaorana antsika rehetra hoy ny filoha Ravalomanana Marc amin’ny anaran’i Neny Lalao Ravalomanana.
11 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA MARC : NITONDRA NY HAFATR’I NENY LALAO RAVALOMANANANA HO ANY VEHIVAVY »
8 mars 2013 à 18 h 12 min
Mahavaky fo ny mahazo ny famille Ravalomanana. Mahereza tompoko fa tsy ho foana akory ny fikelezanareo ainna
Ny herina Andriamanitra dia tanterahina ao anaty fahalemena. koa aza kivy nadia mafy aza ny tsy rariny!
Miarahaba manokana anao ry Neny Lalao noho ny andro 08 Martsa 2013!minoa sy matokia fa homba anao mandrakariva Andriamanitra, marina fa mafy ny mahazo anao indrindra noho ny tsy fahasalaman’i Bebe Razay kanefa Andriamanitra tsy andrindry zareo handrintsika fona, koa mitrotro ambavaka ho anao mandrakariva ny tenako;Mahereza ry Neny!
Ny Miaramila sisa no tena olana eto Madagascar fa ireo voafitaka teny @ 13Mai kosa ngamba efa niverina tamin’iny làlana iny noho izao fahoriana mahazo ny mpiara-belona izao koa raha tsy mahita vahaolana amin’ireo manam-basy ireo dia ho lany andro hifamendrofendro eto fotsiny satria ny mission ‘n’ireo dia ny hamotika tsy misy izany famille Ravalomanana izany:!
Miarahaba am-pitiavana feno sy am-panajana an’Ineny Lalao Ravalomanana amin’ity andro ity, mankahery azy sy ny fianakaviana manontolo koa amin’ny fitsapana mavaivay lalovana. Iray fo aminareo tokoa tompoko ny Malagasy tia tanindrazana maro an’isa sy ireo tonga saina tsy mitaha-mitombo isan’andro!
Miarahaba anao ry Neny Malala !!
Mitrakà fa ianao no herinay sy antony mbola hitolomanay toy izao
ny herim-po hanananao dia zava-dehibe ary antony mbola tsy mahakivy anay ary mbola ao koa
ilay Avo indrindra izay handrandraintsika mafy.Mahereza fa Andriamanitra tsy manary ny olony.
Homba antsika Andriamanitra ary » raha mbola misy koa ny fanantenana tsy maintsy misy ny FARANY ».
8 mars 2013 à 23 h 34 min
Ny fahatairako marina fa heveriko fa ry Dada sy neny no tonga.
Tsy maintsy ho avy ihany izy raha izao no fandehany.
Mino sy mahatoky ihany fa tsy mahazo manary toky izaaany .
9 mars 2013 à 5 h 10 min
Ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy tao @ HAT: miliba anaty 4×4, fampisehoana kiraro sy akanjo tao-volo sy maquillage, de manasongadina tsara ny … dodoshy!!
Misaotra Andriamatoa President, tsy manadino manantitrantitra itony hevi-beventy itony:
1 – tsy maintsy ho tonga ny fotoana HANARENANTSIKA an’i Madagasikara,
2 – hanomezantsika hasina izany vehivavy izany, … vehivavy izay kitapo nifonosana
TSY MAINTSY HO AVY IZANY FOTOANA HAMERENAN’ANDRIAMANITRA NY FIRENENA HO TSARA ARY TSY AMINTSY MANDRAY NY VALIN’ASANY AVOKOA NY OLONA REHETRA – MIARAHABA NY VEHIVAVY REHETRA INDRINRA NY VADIN’NY FILOHA RAVALOMANANA SY NY RENINY TRATRY IZAO 8 MARS IZAO
9 mars 2013 à 6 h 48 min
Isanny zavatra tena tsy tantiko ny hoe niteny tao @ Kianjan’ny fnoana ny Filoha Ravalomanana nefa izaho tsy tany. Soa ihany anefa fa manana ilay Filoha tsy mifendrofendro ny mpanotrona azy fa mahay mampitraka sy manome hery foana. Hafa ihany izany hoe Filoha voahosotra izany.Misaotra anao Atoa Filoha, ombanao sy ny fianakavianao ary ny firenena malagasy mandrakariva Andrimanitra ny fahazavana sy ny fahasoavana.
9 mars 2013 à 21 h 06 min
La belle – mère de Marc Ravalomanana continue d’être instrumentalisée par la mouvance politique de l’ex-président démissionnaire. Nous avons pu obtenir la copie de la lettre adressée par le président tanzanien Jakaya Kikwete, également président de la Troïka de l’Organe Politique, Sécurité et Défense de la communauté des Etats d’Afrique australe (SADC), à Marc Ravalomanana expliquant les conditions du retour de l’épouse de celui-ci. Cette lettre en date du 28 février 2013, que l’exilé d’Afrique du Sud devrait accepter, explique que la visite de l’ex-Première Dame ne devrait pas être politisée, pour ne pas changer son objectif dont la nature est purement humanitaire, l’affrètement par le gouvernement malgache et par la SADC d’un avion spécial pour le voyage de l’épouse Ravalomanana et de son gendre. Et, de par son statut d’ex-Première Dame, Lalao Ravalomanana doit disposer d’un garde de corps, d’un chauffeur et d’un véhicule… Par la même occasion, la SADC enjoint la famille Ravalomanana à ne tenir aucune déclaration politique ou des meetings politiques. Par contre Lalao Ravalomanana peut communiquer et rencontrer qui elle veut…
Si les conditions proposées par le président de la Transition Andry Rajoelina, acceptées par le président de la Troïka, ne satisfont pas encore la famille Ravalomanana ainsi que sa mouvance, pourquoi le gouvernement Beriziky n’affrète-il pas un avion privé médicalisé pour envoyer Bebe Razay en Afrique du Sud ? Non seulement, cela éviterait une instrumentalisation politique de la santé d’une personne âgée, mais les centres médicaux sud-africains sont plus perfectionnés que ceux de Madagascar. Qui plus est la famille Ravalomanana la santé de Bebe Razay dispose d’une bonne surface financière (avec la Chocolaterie) pour veiller à leur mère et grand-mère…
Précédent Article précédent : NAIKE ELIANE : RAHA TSY TAFAVERINA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY FIANAKAVIANY DIA TSY HIHAVANA IZAHAY
Suivant Article suivant : HMF : TSY MBOLA HIVAHA AORIAN’NY FIFIDIANANA NY KRIZY